Government Register Service Provider
Very First Legalized Private Domestic Courier Service in Myanmar
UCL တရားဝင် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ အမြန်ချော-စာပို့
We are pleased to inform you that UCL has launched Nationwide Courier Services in Myanmar. It is Door to Door Services with next day delivery to major cities in Myanmar. As UCL is managed by the experiences managers who have been working for Courier Services overadecade in Myanmar, UCL services is Safe, Fast and Excellence. We can assure our customers that the service quality UCL provides is second to none and meet your expectation. We send several kinds of documents such Brochure, Pamphlet, Invitation Cards, Invoice, Financial Report, Tender Documents, Sales Promotion Leaflets, Application Forms and so on. For the packages, we send Business Samples, Presents, Promotional samples and many more.
Premier Services Delivery
Delivery Notification by Phone , sms
Order pick up from web application
One Month Credit For UCL Members
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော တရားဝင်ပုဂ္ဂလိက နိုင်ငံတော် အစိုးရ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အမြန်ချော-စာပို့လုပ်ငန်း
ကျွနု်ပ်တို့ UCL တရားဝင် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပအမြန်ချောစာပို့ မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသောတရားဝင်ပုဂ္ဂလိက ပြည်တွင်း အမြန်ချော- စာပို့ ၀န်ဆောင်မူလုပ်ငန်းကို (၂၀၁၂ ) ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး ပြည်သူများ အတွက်အောင်မြင်စွာဝန်ဆောင်မှုစတင် ပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းတွင် UCL တရားဝင် အမြန်ချောစာပို့ သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတင်ပြချက်များ၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်များ ကို အဖွဲ့အစည်းများ ၊သံရုံးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ နှင့်ပြည်သူများအတွက် ခေတ်သစ် စံနစ်သစ် ၀န်ဆောင်မူ အဖော်မွန်အဖြစ် ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ လူမူ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်အတွက် UCL တရားဝင် အမြန်ချော - စာပို့လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ကြီး (၂၅) မြို့သို့ဝန်ဆောင်မူတိုးချဲ့ပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး လူမူရေးဆိုင်ရာ အရေးကြီး အမြန်ချောစာများ ၊ချောထုပ်များကိိုု လူကြီးမင်းတို့၏ပေးပို့သူများထံ တိုက်ရိုက် စိတ်ချ ၊လုံခြုံ ၊ မြန်ဆန်စွာပို့ဆောင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ အပြင် အခြားသောပေးပို့သူများထံမှလည်းလူကြီးမင်းတို့ ထံသို့ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အမြန်ချောစာများ၊သတင်းအချက်အလက်အကြောင်း ကြားစာများနှင့် အမြန်ချောဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများကိုအချိန်မီအမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေးအတွက်အမြဲကူညီပံ့ပိုးပေးနေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ UCL တရားဝင်အမြန်ချော-စာပို့လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင် ့ကျွန်ုပ်တို့မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုအကျိုးအမြတ် များ အားလုံးကိုခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကြော်ငြာများ၊သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဖိတ်စာများ၊အမြန်ချောစာများကိုလည်းအိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မူပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အခြားသောပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းများ ထက်အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ UCL တရားဝင် အမြန်ချော-စာပို့လုပ်ငန်းသည် မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိက တရားဝင် အမြန်ချောစာပို့ လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်နှင့် အညီ လူကြီးမင်း တို့၏ အမြန်ချောစာပို့ ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို စိတ်ချ ၊လုံခြုံ ၊ မြန်ဆန်စွာ ကူညီဝန်ဆောင်မှုဆောင်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းအမြန်ချောစာပို့လုပ်ငန်းတွင် ရန်ကုန် - နေပြည်တော်သို့ စာပို့မည်ဆိုပါက စာတစ်စောင်လျှင် ငွေကျပ် ( ၂၅၀၀) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ ပို့ မနက်ဖြန်ရောက် စနစ်၊ စာထုပ်လက်ခံသူအား ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားပေးခြင်းစနစ် အင်တာနက်စာထုပ်ခြေရာခံစနစ်၊ အိမ်/ရုံး အရောက် ယူဆောင်ပို့ပေးသော စနစ်များပါ၀င်မည် ဖြစ်သည်။အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့််အဝေးပြေးဂိတ်များသိုု့သွားစရာ မလိုတော့ပဲ ဖုန်းဖြင့်အိမ်မှနေပြီး ခေါ်ယူပါက လာရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသောကြောင့် အချိန်/လူ သက်သာသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် အမြန်ချောပို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် လုံခြုံစိတ်ချ၊ လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်လိုသူများ စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါ အဆိုပါ အမြန်ချောပို့လုပ်ငန်းကို နေ့စဉ်နံနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအ ထိ မြို့ ကြီး မ ျား ရှိ စာတို်က်ကြီးများ ၊ UCL ကောင်တာများ တွင်ပိတ်ရက်မရှိ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက် ရှိ်ပါသည်။